तपाई राती निन्द्रा लाग्दैन, राम्ररी निदाउन यसो गर्नुहोस्
जुन 2, 2019 जुन 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment निदाउन, निन्द्रा
मानिस शारारिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ्य रहन गहिरो निन्द्रा ७ देखि ८ घण्टा सुत्नुपर्ने हुन्छ । निदाउनका लागि औषधी सेवन गर्नु राम्रो विकल्प होइन । त्यसले नकारात्मक असर गर्छ । कतिले निदाउने बाहानामा मदिरा सेवन गर्छ, जो एकदमै नराम्रो अभ्यास हो । मस्त मातेपछि बेहोसीमा सुत्ने बानीले स्वास्थ्यमा थप ठूलो हानी गर्छ । आफुलाई के कारणले निन्द्र लागेको छैन भन्ने कुराको पहिल्याउनुपर्छ । कसैलाई चिन्ताले हुनसक्छ, कसैलाई शारीरिक कारणले । कसैलाई बाह्य वातावरणले पनि निन्द्र नलागेको हुनसक्छ । निन्द्रा नलाग्नुको कारण फेला परेपछि सोहि अनुसार निदानको उपाय खोज्न सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य केहि विधी छन्, जसले निदाउन सहयोग गर्छ । त्यसकारण तपाई राती राम्ररी निदाउन सक्नुहुन्न, यसो गर्नुहोस् ।
बेडरुममा राख्न नहुने यी ५ चिजहरु
मानसिक तनावबाट मुक्त रहने उपायहरु
१. राती सुत्ने समयलाई नियमित गरौं । सम्भव भएसम्म ८ देखि १० बजेसम्म ओछ्यानमा पुग्नुपर्छ । नियमित सुत्ने अभ्यासले ठीक समयमा निन्द्रा लाग्छ ।
४. सुत्ने समयमा हरहिसाब गर्ने, योजना बनाउने, वितेका कुरा सम्झने, अपमानति भएको कुरा सम्झने जस्ता कुराले मन अधैर्य र अशान्त हुन्छ । त्यसैले सुत्ने बेला यस्ता कुराबाट ध्यान हटाउनुहोस् ।
← बुटी बाधेर पनि के रोग निको हुन सक्ला त ?
१२ मुखी रुद्राक्ष धारण गर्दा हुने फाइदाहरु →
मे 28, 2019 मे 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
कति घण्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ ?
मार्च 23, 2018 नोभेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
One thought on “तपाई राती निन्द्रा लाग्दैन, राम्ररी निदाउन यसो गर्नुहोस्”
Pingback: गहिरो निन्द्राका लागि के गर्ने ? जानी राखौ